Sociic - Ọrụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
YouTube enweghị mmasị
Echiche YouTube masịrị [UPVOTES]
Echiche YouTube adịghị amasị [DOWNVOTES]
Twitch Nlele Ọwa
Twitch -eso ụzọ
Na-eso ndị na-eso ụzọ
Ndị na -eso TikTok (Ndị na -eso ụzọ)
Ọ dịghị ngwaahịa na ụgbọ ibu!
Biko mee nhọrọ gị.
Sociic bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na -ewu ewu nke ukwuu na -enye ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ nwere nka na ndị ọkachamara nwere ike inyere gị aka itolite azụmaahịa gị, ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na njirimara gị n'ịntanetị.
Mon-Fraị 9 am-6pm
#1 Ahịa maka Ọrụ Mgbasa Ozi
Zụlite Mgbasa Ọha Gị ugbu a
Zụta ezigbo ndị na -eso ụzọ Instagram, Mmasị, nlele vidiyo, nkwupụta na ọnụ ala
Zụta Echiche YouTube, Mmasị, Ndị debanyere aha, Nkwupụta, Ekekọrịta na ọnụ ala dị ọnụ ala
Zụta Ezigbo Twitch Ndị na -eso ụzọ, nlele ọwa, nlele ndụ, ndị debanyere aha na ọnụ ala dị ọnụ ala
Anyị na -enye gị Social Services kacha ọsọ n'ahịa. A na -ahazi iwu niile a kwụrụ ụgwọ n'ihe na -erughị otu nkeji ozugbo otu onye ọrụ kwadoro ya.
Dabere na Nkwado Team
Ndị ọrụ nkwado anyị raara onwe ha nye dị mgbe niile. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọrụ anyị ma ọ bụ nwee nsogbu ọ bụla na usoro gị, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị.
Nchekwa bụ ihe kacha mkpa anyị mkpa
Anyị achọghị nzere akaụntụ gị. Yabụ, ọ dị mma na onweghị ohere maka mbanye na machibido akaụntụ ahụ
Ndị mmadụ anaghị ahọrọ itinye oge n'ime ihe nke yiri ụfọdụ ihe mgbe ochie. Kama nke ahụ, mgbe ha hụrụ ndị otu ndị ọzọ na -esonye na netwọkụ mmekọrịta, ọ na -eme ka ha mee mkpebi siri ike gbasara itinye ego na -echeghị nke abụọ. Ozi ọma bụ na ọ na-azọpụta oge, na-efu ọnụ ma na-arụ ọrụ dị ka amara. Ma enwere ebe anyị batara, na -enye gị ikpo okwu nke nwere ike inyere gị aka ịkwalite ọkwa Social gị n'oge adịghị anya.
Nchọpụta na -egosi lectores legere.
AKWUKWỌ AKW QKWỌ
Anyị chọrọ ịhapụ ndị ahịa anyị mmetụta na -adịgide adịgide. Ọ bụrụ na afọ juru gị n'ịdị mma ma ọ bụ nnyefe nke iwu gị, gwa anyị. Anyị ga -anwa idozi ya ngwa ngwa!
Ọnụahịa dị ala
Anyị na -enye ọnụ ahịa kacha ala na ụgbụ. Anyị na -aga n'ihu n'ihu wee kwupụta na ọ bụrụ na ịchọta ụlọ ọrụ ọ bụla edebanyere aha yana na -ekwu na ọ ka mma, anyị ga -akụ ọnụ ahịa ha na -enye.
Ndị ahịa obi ụtọ gbasara anyị
Saịtị a nyeere m aka inweta ọtụtụ ndị na -eso ụzọ yana nkwado dị ịtụnanya n'ezie
Weebụsaịtị dị ịtụnanya ịtụ ndị ọrụ mmekọrịta ugbu a nyere iwu 10000 twitch ndị debanyere aha na -atụgharị oge dị oke egwu
Sociic bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na -ewu ewu nke ukwuu na -enye ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ nwere nka na ndị ọkachamara nwere ike inyere gị aka ito azụmaahịa gị, ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na njirimara gị n'ịntanetị. Ụlọ ọrụ anyị na -enye ọrụ ọnụ ọnụ yana oke akụ na ụba. Ọrụ ndị ahụ na -agbanwe agbanwe na enwere ike ịhụ nsonaazụ ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere ndị na -enye ọrụ ndị ọzọ. Anyị agafeela ụlọ ọrụ kwụsiri ike na ndị ahịa ama ama.
Nwebiisinka © 2018 - 2021 | Sociic